बाथ रोग | Bhalakushari
बाथ रोग तपाईहाम्रो लागि अनौठो खाले रोग होइन । यो रोग लागेर थला परेका निकै जनालाई हामीले देखेका नै छौ । यो रोगले पछि हाड, जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, कडा हुने तथा सुन्निने गर्छ भन्ने कुरा त हामीमध्य धेरैलाई थाहा पनि छ । तर यो रोगले शरीरको फोक्सो, फियो, मुटु तथा अरु अंगहरूलाई पनि असर पुर्‍याउँछ । यो रोग सबै ठाउँमा सबै उमेरका मानिसहरूमा पाईन्छ । यो रोग ज्यादै देखा पर्ने भएपनि लाग्ने कारण अझसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन ।
यो रोगका लक्षणहरू कसै कसैलाई एक्कासी एकैपटक देखिन्छ भने कसैकसैलाई विस्तारै देखा पर्ने गर्दछ । एक्कासी लक्षणहरू देखा पर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको जोर्नी दुख्ने तथा चलाउनै नहुने गरी सुन्निने गर्छ । यसका साथै यस्ता ब्यक्तिहरूलाई मन्द मन्द वा कोही कोहीलाई हन्हन्ती ज्वरो पनि आउन सक्छ । यदि रोगको लक्षणहरू विस्तारै देखा प¥यो भने शुरुमा एउटा वा वढी जोर्नी र जोर्नी वरिपरिको मांसपेशी दुख्दछ । विहान उठ्ने वित्तिकै जोर्नी दह्रो हुने (जति नहुनु पर्ने त्यति नहुने तर विस्तारै चलाउँदै गए पछि ठीक हुने) यो रोगले घरी जोड संग च्याप्छ घरी छाड्छ । यसरी समय वित्दै गए पछि जोर्नी मात्र होइन पूरै शरीरमा यसको असर देखा पर्न थाल्दछ । जोर्नी दुख्ने र सुन्निने बाहेक मन्द मन्द ज्वरो आउने, जीउ थकित हुने, रगतको कमी हुने, तौल घटने, मांसपेशीहरू दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखापर्न थाल्दछन् । यो रोग बड्दै गएपछि हाडहरूको तल माथी छेउहरूको आकार बड्ने, जोर्नीहरूले ठाँउ छोड्ने, जोर्नीहरू कमजोर हुने, जोर्नीहरू खुम्चने र जोर्नीहरूमा अनेकरुपका विकृतिहरू आउन सक्क्छन् । बाथ रोग जटिल भएपछि जीवाणुको संक्रमणले हुने जोर्नीमा पिप जम्ने रोग (क्भउतष्अ ब्चतजचष्तष्क) हुन सक्छ । साथै मानसिक रोग पनि निम्म्त्याउन सक्दछ ।
यसको उपचार कसरी गर्ने
के कारणले लाग्छ भन्ने थाहानभएकाले रोकथाम यसरी गर्नु पनि भन्न सकिदैन । रोगको उपचार गर्ने भन्नासाथ रोग निको पार्न भनेर बुझिन्छ । तर यसलाई निको पार्ने औषधि छैन । यसो भनेर यसका रोगीले उपचार गरीने काममा ढिलासुस्ति गर्नु हुँदैन र उपचार समयमै गराउनु पर्छ । यसको उपचारले रोगीको लक्षणहरूबाट छुटकारा दिलाउन, रोगलाई कडा हुनबाट रोक्न तथा प्रभावित जोर्नीहरूलाई काम दिने बनाउन सकिन्छ । रोगको अवस्था हेरेर यसको उपचार तीन किसिमले गर्ने गरिन्छ । जुन यस प्रकार छन् ।
१. सामान्य उपचार
२. जोर्नी सम्बन्धी उपचार
३. औषधि बाट गरिने उपचार
सामान्य अवस्थामा आराम, व्यायाम, रगत कमीको उपचार गराईन्छ । कडा र तिब्ररुपले शुरु भएको अवस्थामा रोगीलाई करीब ३ हप्ता सम्म घर वा अस्पतालमा शारिरीक आराम गराउनु पर्छ । कडा खालको विस्तारामा सुत्न मानसिक आराम दिन पनि कोशीस गर्नु पर्छ । दीर्घकालिन रोगीमा रगत कमी हुने हुनाले रगत बड्ने खानेकुराहरू खानुपर्छ । रगतको कमी भयो भने आइरन चक्की, फलिक एसिड जस्ता रगत बढाउने औषधिहरू करीब ३ महीनासम्म दिनु पर्छ ।
२. जोर्नीसम्बन्धी उपचार
जोर्नीमा हुने दुखाई र विरुपपतालाई कम गर्र्न काम्रोको प्रयोग गर्न सकिन्छ र कहिलेकाहीं जौर्नी भित्रै कोर्टीकोस्टेरोइड जातका सुई पनि दिने गसिन्छ । यो सुई हाड बिशेषज्ञको सल्लाह लिएर मात्र लिनुपर्छ । जथाभावी लिनु वा दिनु हुँदैन ।
साधारण दुखाई छ भने प्यारासिटामोल दिनुपर्छ । कडा खालको दुखाईलाई र सुन्निने कम गर्नको लागि एस्प्रिन आईबूप्रोफेन, डाइक्लोफेनयाक, पाइरोक्सीकाम, जस्ता औषधिहरू दिनुपर्छ । यी बाहेक अरु पनि धेरै खालका औषधिहरू छन् । जोर्नीहरू विरुप र काम नदिने नै भएमा खासखालको शल्य चिकित्सा गर्न अस्पताल पठाउनु पर्छ ।